सनसनीपूर्ण हारले उब्जाएका प्रश्नैप्रश्न फराकिलो गोल अन्तरले पराजित भएसँगै बार्सिलोना टिममा प्रश्नको उत्तर खोज्न थालिएको छ। बार्सिलोना कमजोर टिम हो? बार्सिलोनाको स्तर घटेको कि विपक्षी टिमको खेल सुध्रिएको? बार्सिलोनाको दबदबाको अन्त्य भएको हो? प्रशिक्षक क्विके सेटियनको रणनीति फेल खाएको कि खेलाडीले खेल्न नसकेको? हारसँगै विभिन्न प्रश्नहरु उब्जिएका छन्। शनिबार, साउन ३१, २०७७
जितमा पनि किन खुसी छैनन् ग्यारेथ बेल? स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडले ला लिगामा ३४औँ उपाधि जित्यो। एक खेल बाँकी छँदै बार्सिलोनासँग ७ अंकको फरक पारेर उपाधि जितेको मड्रिडका लागि... शुक्रबार, साउन २, २०७७